Ngokwesiko, kukholelwa ukuba ukufakela kwamanzi kungabalulekanga kuphela ehlobo ngexesha leeholide, ukuhamba olwandle kunye nokuzonwabisa ngamanzi. Kodwa oku akunjalo - ekwindla nasebusika kaninzi kukho iingxaki ngenxa yokuba ngexesha lemvula, i-mascara okanye i-powder iyahlanjululwa xa uqhubela kwiintlanganiso ezibalulekileyo. Ngako oko, musa ukukhawuleza ukukrazula imali oye wasebenzisa ehlotyeni kumacandelo ngamanzi. Ukuba kwi-arsenal yakho akukho zimonyo ezifanelekileyo, lixesha lokulithenga.
Imvula nekhephu zingonakalisa nje ukuzenzela kwamehlo. Kuyaziwa ukuba ithoni ekhanyekileyo yesikhumba sisiseko salo naluphi ukwenziwa, ngoko ke nayiphina impazamo kule nto inokuchaphazela ukubonakala kwakho konke. Iindlela eziqhelekileyo zeetoni kunye neepowders azixhatshazelisi kumanzi, zinokuzihlamba ngokukhawuleza, i-smear, i-clog kwi-pores ize ibonakale.
Ukuze wenze i-cosmetics ihlale ihlala kade kwesikhumba kwaye musa ukuyilahla kwiimpawu phantsi kwefuthe lobumanzi, isikhumba sakho sifanele sigqibe ngokupheleleyo. Ukwenza oku, sebenzisa umuthi ohlambulula ngokucokisekileyo ulusu, uze uhlwithe ukususa iincinci zesikhumba ezifile. Isinyathelo esilandelayo yi-lotion okanye i tonic, eyanciphisa iipore. Amancinci ama-pores, i-tonal encinci ye-tonal kunye ne-powder iya kugxinwa kuwo. Ukuba le mali iyanamanzi esikhumbeni, iya kuba yindawo engcolileyo kwaye ihlambuluke yesikhumba iya kuba nzima kakhulu.
I-tonal cream, engayixhatshazwa kumanzi, yenza ulusu lube lukhulu kwaye lubukeka lufana nomsiki onzima. Kungcono ukunqabela ngokupheleleyo, ingakumbi akufanelekanga ukuphuma kwemini. Kodwa umgubo, oya kuba ngumlingo wamanzi, awukho nje. Kodwa ukudala ithoni evulekileyo, eya kuhlala kwesikhumba ixesha elide, unako. Emva kokuhlanjululwa, ulusu kufuneka luhluthe kakuhle, kwaye ke, xa i-cream ikhatywayo, sebenzisa i-corrector kwiinkalo zengxaki ebusweni, ngoko umbane ococekileyo onamaqabunga ebonakalisa. Oku kuya kwenza ulusu lukhanye, loo mveliso ayinakwenzeka ukuba inqabile kwimvula elula kwaye ayiyi kuphazamisa ukubonakala kwayo yonke into, njengoko ingaqhubeki kwesikhumba.
Enye into enhle - ukutyhulwa okanye iseshoni yokutyhulwa kwi-solarium. Inyaniso kukuba i-skin tanned ibukeka ilungile, iintsilelo ezincinci kuzo zibonakala zingabonakali. Ukwenza isikhumba esenziwe ngesikhumba ekwindla nakusibusika kuya kuba lula ngokwanele ukomityu ococekileyo kunye nefuthe le-tonal.
Ukwenziwa kwamehlo angenawo amanzi yinto elula kakhulu, njengoko kubonakala kwimeko yokwenza ukuba kukho imveliso enkulu engakwazi ukumelana nokutyhila kwamanzi. Ukuba ukhathazekile kukuba i-eye makeup ayiyi kuhlaselwa phantsi kwemvula okanye i-sleet engazenzekiyo, zama ukuba ungagqithiseli amehlo akho ngezithunzi, ngokukodwa i-dark shades. Kungcono ukusebenzisa ama-shade ama-2-3 weetayidi ze-pastel. Unokwazi ukubonisa amehlo akho ngeepensile ezingenanzi namanzi. Kubalulekile kuphela ukuthenga iindlela ezikhethekileyo zokususa ukungenwa kwamanzi nje kuphela, njengoko kungelula ukuhlamba i-mascara engenawo amanzi ngeendlela eziqhelekileyo.
Ukuba ukuzenzela kwakho okuqhelekileyo kubandakanya ukuhlamba iinyawo zakho, ngokokuba imvula imvula kungcono ukunqaba ukudweba ngeethunzi okanye ipensela. Kungcono ukuya kwi-salon kunye nepeyinti zamacwecwe kunye nepeyinti ekhethekileyo, ngoko ziya kubonakala zikhangele, kungakhathaliseki ukuba imozulu kwaye inike umboniso ocacileyo.
Ukubunjwa kwemilomo engenamanzi ayinakubizwa ngokuba yimfuneko. Nangona kunjalo, i-lipsticks ehlala ixesha elide emlonyeni iyathandwa. Iifomtiki kunye ne-glosses zomlomo azifaki emanzini, kodwa zinyamalalala nekhofi yasekuseni okanye ugwayi. Ukuba ufuna ukwenza imilomo yokwenza umlomo onokumelana nokutya kwasekuseni nokuhlwa kwasemini, kuya kufuneka usebenze nzima.
Umgaqo wokuqala wokuphala kwamanzi umlomo wenziwe ngamathoni engokwemvelo. Ekubeni iya kuba yimibala emininzi, akufanelekile ukugqithisa imilomo ngemibala eqaqambileyo. Okokuqala, kufuneka usebenzise umququzeleli okanye uhlambulule emlonyeni wakho, ibe isiseko esisisiseko. Xa i-cream ikhathaza, imilomo isetyenziswe ngomlomo, imilomo ingaba yimpuphu phezulu kwaye kuphela kuphela i-droplet ye-colorless ekhanyayo phakathi komlomo osezantsi isetyenziselwa ukuwanika ivolumu. Unokusebenzisa umlomo oqhelekileyo, le ndlela yokufaka isicelo iya kuyenza ixesha elide emlonyeni. Kodwa kubalulekile ukukhetha i-lipstick kunobumba obunzima kwaye, ngokuchaseneyo, ukukhanya kukhanya.
Ukwenziwa kwamanzi okungenamanzi kwenza kube lula ukuhlala kwindawo nayiphi na imimoya ngaphandle kokungcungcutheka kwindlela yokubonakala. Kodwa ukudala ukwakheka okupheleleyo okuya kunqandwa kwi-salty spray okanye kwimvula yasekwindla kunzima kakhulu. Okokuqala, kuthatha ixesha elininzi, kakuhle, kwaye lifuna ubuncinane ubuncwane bokubumba. Ukuba ukhangele inketho elula, ikhona. Kuyo nayiphi na indlovu enkulu yobuhle kukho inkonzo ebizwa ngokuthi "tattoo". Inkosi izakukwazi ukwenza imilomo igcwale kwaye ikhanyise ixesha elide, amehlo kunye neenki zicaca ngakumbi. Enyanisweni, ukudweba amathambo kukuvumela ukuba ulahleke ngokupheleleyo ukuzenzela kwendabuko, uzakufuna kuphela i-tonal base, i-mascara kunye ne-glossless lip gloss. I-tattooing ikuvumela ukuba ukhangele ulungele nayiphi na ixesha ebomini bakho, akudingeki ukuba ulungiswe ngethuba lemini, akuyikwesaba amanzi okanye ilanga. Ukuba ulungele ukujamelana nemizuzu emininzi engathandeki kwikhabini, kufuneka uqikelele ngale ndlela elula yokufumana ukungenwa kwamanzi ixesha elide.
Isitayela saseYiputa: i-meikap-i-trend6 entsha-2016 esuka eChanel
Ukwenziwa kwamehlo ama-blondes ngamahlo aluhlaza
Zibophezele ukulwa nobuvila
Amaphiko enkukhu eCitrus
Indlela yokucoca i-shish kebab evela kwenkomo
Iipropati ezisetyenziswayo zesoya
UCrespelle noRadicchio noGorgonzola
I-Lent 2016: imihla kunye nekhalenda yama-Orthodox namaKatolika